တစ်နေ့တာအမောများ။။။။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » တစ်နေ့တာအမောများ။။။။။
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Sep 4, 2011 in Arts & Humanities | 23 comments
မနက်ထဲက အခြေအနေကမကောင်း…အိတ်စပိုစ် အတင်သင်္ဘော ကထွက်သွားပြီ..။။။
Buyer အတည်ပြု တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ Label တွေက သင်္ဘော ထွက်ပြီးကာမှ အကြောင်းကြားလာတယ်လေ
မှားနေပါတယ်တဲ့ …ကောင်းကြရော သူဌေး နဲ့ ခေါင်းခြင်းဆိုင်ကြရပြီလေး ဘာလုပ်ကြမလဲ ပစ္စည်းဂျပန်ကိုရောက်ဘို့က
အနည်းဆုံးရက်နှစ်ဆယ်ပစ္စည်းပေါင်းက (၈၀၀၀) တစ်ခုခြင်းဖွင့် ဖောက်ထုတ်ပြင် ပြန်ပိတ်လုပ်ရမှာ ဂျပန်မှာပြင်ရင်ရော
အလုပ်သမားခနဲ့မွဲရောပေါ့ သူတို့ဆီမှာက အချိန်ပိုင်းလုပ်သားခတွေက ဈေးကကြီးပါဘိ ဒါဆို ကွန်တိန်နာပြန်ပို့ …..။။
ဒါလဲမဖြစ်သေးဘူးဗျ return cargo ပါမစ်ပြန်လျှောက်တာနဲ့ ပြင်ပြီးပြန်ပို့တာနဲ့ စရိတ်ကကာမိမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်
ပြန်လည်တင်သွင်းလာတဲ့စရိတ် ပြန်လည်တင်ပို့တဲ့စရိတ် တွေအပြင် လွယ်လွယ်ကူကူ ဆိုပြသနာမရှိ အချိန်ကြာနေမှ
ဒုက္ခ ပဲလေ… ဘောစီက ဘာစဉ်းစားတယ်တော့မသိ ဂျပန်ကိုဒီကလူတွေသွားမယ် …..ဆုံဖြတ်ချက်ထွက်လာပြီ.။။။
အဲဒီနေ့ထဲက ရှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ဗျာ ဟိုရုံးပြေး ဒီရုံးပြေး ဟိုမှာလုပ်ရမယ့် ရက်တွက် ကြာမယ်အချိန်နဲ့ လေယာဉ်လက်
မှတ်ခ ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်တင်ပြ …။။
“ဒီကသွားတဲ့သူတွေဟော်တယ်မှာတော့တည်းလို့မရဘူး ဂျပန်က ware house မှာပဲနေ အဲဒီမှာအိပ် အဲဒီမှာပဲစား
ဂျပန်အစားအစာနဲ့ ရက်ရှည်စားနိုင်မယ်မထင်ဘူး နင်တို့ကိုရီးယားမိတ် ခေါက်ဆွဲတစ်ပါကင် နှစ်ပါကင်လောက်သယ်ဘို့
စီစဉ်ထား အခုကနေ ပါတ်စပို့စ် စလုပ်ကြတော့”…။။။။
ဒါတွေပြီးတော့ ခဏထိုင်ရုံရှိသေးတယ် ဖုန်းလာပြီးလေ “ဗျို့ဆရာ ကြွခဲ့ပါအုံး ရုံးကို”
သိလိုက်ပြီ အမှုတော့ပေါ်ပြီး ဒီအမှုကလဲ ကြီးတဲ့ပြသနာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ ကျုပ်တို့ Garment တွေမှာ ဒီအဖြစ်က
ပြောပလောက်တာမဟုတ်ဘူး လက် “အပ်”စူးတဲ့အမှု အပ်စူးတဲ့ကလေးက စာတိုငညိုလုပ်လိုက်တာပဲ
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ဒီလိုပဲရှင်းရမှာပေါ့ ဖူလုံရေးကဒ် တွေလုပ်ထားပေမယ့် ကိုယ့်အလုပ်သမားပဲလေ ဒီကဒ်ကြီးပေးပြီး
ရော့ဆေးသွားကုလို့ ပြောလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျ သင်တော်ရာဆေးရုံ ဆေးခန်းတော့ ပြပေးရသေးတာပဲလေ ကလေးမ
အတွက်ဆေးခန်းကုသစရိတ်က မနေ့က တနံနက်တင် သုံးသောင်းကျော်ကုန်သွားတယ်လေ ကျန်တာဘာမကျေနပ်တယ်
မသိပါဘူးတိုင်လေရဲ့ ဒါနဲ့ ရုံးကကားမောင်းပြီးသွားလိုက်တယ် ဟိုရောက်တော့ လူစုံနေပြီပဲ ကဲမျက်နှာစုံညီ မေးကြ
ကျုပ်လဲ မျက်လုံးတောင်ပြူးသွားတယ် ဒါနဲ့ပဲ သူရဲဆေးမှတ်တမ်းတွေ ထုတ်ပြပြီးကုန်ကျစရိတ် ဘောက်
ချာတွေ ပါ ထုတ်ပြလိုက်ပြီ..။။
“ဆေးကုပေးပါဆိုလို့ အခုကုပေးထားတယ်နော် အခုဘာထပ်ဖြစ်နေသေးလို့လဲ လက်ကိုအပ်စူးတာ
ဆေးရုံပါ တင်ထားပေးရမှာလား” …။။
“စိတ်ချပျောက်တဲ့အထိကိုယ် ကုပေးအုံးမှာ မနက်ရုံးလာခဲ့ ဆေးခန်းထပ်ပြပေးမယ်””
အခုလဲကုပေးထားတာပဲဟာကို ဘာတွေပြောနေတယ်မသိဘူး ကိုယ်အိမ်မှာလက်အပ်စူး
ရင်ဘာလုပ်မလဲ ဆေးခန်းသွားမှာလား မေးချင်စရာပဲလေ ကျုပ်ဘက်ကတော ဘယ်အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဂရုထားလုပ်ပေး
တာပဲလေ သူတို့ဘက်ကနားလည်မှု လွဲနေတာတော့ ကျုပ်လည်းမတတ်နိုင် ဘူးနောက်ဆုံတော့ ဆေးကုပေးမယ်လို့
လက်မှတ်ထိုးပြီးပြန်လာလိုက်တယ် လက်မထိပ်ကလေး အပ်ဆူးတာကို ဆေးခွင့်ငါးရက်ပါပေးပစ်လိုက်တယ် မှတ်ရောပေါ့
စက်ရုံမှာ တစ်ချို့ ကလေးတွေဆို အပ်ဆူးတောလောက်တော့ သူဟာသူလုပ်ပြီး… ပြီးမှ ရုံပေါ် က ဆေးဘောက်စ် မှာ
ဆေးတောင်ပြီး အလုပ်ဆက်လုပ်ကြတာပဲ သူ့ကျမှ သေနတ်မှန်တဲ့ဒဏ်ရာကျနေတာပဲ တစ်ခါ
တစ်လေတော့ လူတွေဟာမုန်းခြင်းစရာကောင်းလောက်အောင် ကိုယ်တစ်ဘို့ထဲကြည့်ပြီး..
ရုံးရောက်ရုံရှိသေးတယ် ..ဖယ်ရီကားမမှီတဲ့ ပြသနာကစောင့်နေလေရဲ့ ဘာဖြစ်လဲမေးတော့ မနက်က ဖယ်ရီကားကို
လူမစုံပဲ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက ထွက်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စပဲ ရှင်းပေးရမှာပေါ့ ကဲ “လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း ခေါ်လိုက်ကြ” ရောက်လာတော့
မေးမြန်းငြင်းခုံဖြစ်ကြ နဲ့ သူမပြောဘူးသူပြောတာနဲ့ပေါ့ လူက နည်းနည်းစိတ်ချည်ပေါက်လာတာနဲ့ ရုံးပေါ်က အကုန်မောင်းချ
လိုက်တယ်ပြီးမှ ဖယ်ရီကား အုံနာဆီဖုန်းဆက်ပြီး မနက်ပိုင်းဖယ်ရီအားလုံ စုရပ် သတ်မှတ်နေရာမှာ ကျွန်တော် ထုတ်ပေး
ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်းသာ တိတိကျကျ ထွက်ကြဘို့ ပြောရတယ်…သူတို့မေးနေရင် ရန်ဖြစ်ကြရုံအပြင်ဘာမှမထူးဘူးလေ..
မတစ်ရာသားသမီးတွေ ဆိုတော့အမှန်ကိုလဲပြောမှာမဟုတ်ဘူး ဖယ်ရီကားက ညနေ အလုပ်လွှတ်ချိန် နောက်ကျပြီးလာကြို
တာ ပြသနာမရှိပေမယ် မနက်ပိုင်း အလုပ်တက်ချိန်နောက်ကျတာ စောထွက်တာက ပြသနာရှိတယ်လေ နောက်ကျပြန်ရင်လဲ
အလုပ်ချိန်မမှီဖြစ်နိုင်သလိုစောထွက်ရင်လဲ ၀န်ထမ်း အကုန်မပါတဲ့ အတွက် ၀န်ထမ်းတွေ နောက်ကျနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်
ဖယ်ရီကားဟာမနက်ပိုင်းမှာ အချိန်မှန်ထွက်ဘို့အရေးကြီးပါတယ်မနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်သွားတဲ့ လှိုင်သာယာဖယ်ရီ အက်ဆီးဒင့်
လို မဖြစ်ဘို့ရင်မနေရတာကလဲ စိတ်ရှုတ်စရာပါ..။။
ဖုန်းဆက်ပြီးရုံရှိသေးတယ် ဖုန်းဝင်လာတယ် ကျုပ်ကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့ ဒီလောက်တွေ့ချင်တဲဟာတွေအကုန် တွေ့မယ် ဘာမှ
မဟုတ်ဘူး သင်္ဘောလိုင်းတွေက မာကက်တင်း တွေလေ မျက်နှာသိတွေဖြစ်နေတော့မလာနဲ့ပြောဘို့ကလဲ မဖြစ်ပြန်ဘူးကိုး
လာပေါ့သူတို့ကလည်းမက်လုံးလေးတွေပေး ကြသေးတာဗျ Shipment တစ်ခု ဘယ်လောက်ချန်ပေးရမလဲ ဆိုတာမျိုးလေးတွေ
ကလဲ ရှိသေးကိုယ်က ကြားကနေ ချိတ်ဆက်ပေးရုံနဲ့ ရတတ်တာကလား အဲဒီ လိုင်းက လူတွေကလဲ shipment ရရေးသာ
အတင်းလိုက်လုပ်ကြတာ ရသွားပြီဆိုရင် သိပ်ဂရုစိုက်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူး လုပ်ခြင်သလိုလုပ် စာရွက်စာတမ်းကြေးတွေ
ကောက်ခြင်သလိုကောက်ကြတော့တာပဲ ကုမ္ပဏီ တွေကလဲ မြန်မာပြည်မှာ ဒီသင်္ဘောလိုင်းတွေပဲ၇ှိတော့ သူတို့ကိုပဲသုံးပြီး
တင်သွင်း/တင်ပို့နေရတော့ အဲဒီလိုင်းတွေရဲ့ ဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်းပြ စာရွက်စာတမ်းကြေးတွေ ရှာကြံ တောင်းနေ
ကြသမျှ သူတို့ ပြုသမျှ နုနေကြရတာပဲလေဗျာ…။။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ပြသနာပေါင်းစုံ အကုန်လိုက်ရှင်းနေရတာ တစ်ခါတစ်လေတော့ လည်း ကျုပ်လည်းလူသားပေမို့ စိတ်ချဉ်
စိတ်မိုက်ရိုင်းလေးတွေတော့ ၀င်မိသား တစ်ခါတစ်ရံ များ ဘုတော့လွတ်ရင်လွတ်မိတတ်တာပဲလေ
နေလည်ပိုင်းကျမှ ..ဘောစီ ထွက်လာပြီး စက်ရုံသစ် ကိစ္စ အတွက် အခုသွားပါ လာပြောလို့ သွားမယ် လုပ်ခါမှ ဘောစီက
သူစီးနေတဲ့ ဆလွန်းကာယူသွားပြောလို့ သဘောတော့ကျမိသားဗျ ကျုပ်ဘောစီက ကျုပ်ကို စက်ရုံက လိုက်ထရပ်ကြီးနဲ့
သွားရင် သိက္ခာကျမှာစိုးလို့ သူဆလွန်းကားယူသွားခိုင်းလိုက်တာပဲလေ ..ဒီလိုနဲ့ စက်ရုံသစ်ကိစ္စ လူကြီးတွေနဲ့ပြောဆိုပြီး
ပြန်အလာစက်ရုံပေါက်ပေါက်ဝရောက်တယ် ဆိုရင်ပဲ လူငယ် သုံးယောက် လုံခြုံရေးနဲ့ ဘားတွေအခြေအတင်ဖြစ်နေကြတယ်
““စက်ရုံထဲက ကောင်မလေးရဲ့အကိုလို့ ပြောတယ်ဆရာ အိမ်မှာအမေနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ လာခေါ်တာတဲ့””
“ ဟုတ်လား..ဒါဆို လုံခြုံရေးတစ်ယောက်ရုံးပေါ်လိုက်ခဲ့ သူတို့ကိုစောင်ခိုင်းထားလိုက်”
ရုံးပေါ်က ပြူတင်ပေါက်က သေချာကြည့်တော့.. မဖြစ်နိုင်အကိုလို့သာပြောတာ လာခေါ်တဲ့ကောင်မလေးနဲက ရွယ်တူ
“ရော့  လာခေါ်တဲ့ကောင်လေးကိုဒါတွေ သေချာရေးခိုင်း ပြီးရင်ကျုပ်ကိုပြန်လာပြ ကြားလား”
စာရွက်အပိုင်းလေးယူဆင်းသွားတောတာပဲ ကျုပ်လဲ အပေါ်ကနေသေချာအကဲခတ်နေရင် စာရေးမတွေကိုလှည့်ပြောရ
““ဟဲ အောက်မှာလာခေါ်တယ် ဆိုတဲ့ စက်ရုံက ကလေးမ ရဲ CV ဖောင်ရှာပေးစမ်း””
မကြာပါဘူး လုံခြုံရေး ဘိုတော်ပြန်တက်လာပြီးစာရွက်ပြန်ပေးတယ် ကျုပ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ နားမလည်သလို
အကြည့်နဲ့ပေါ့လာခေါ်တဲ့ ချာတိတ်ရေးထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ ၀န်ထမ်းကလေးမရဲ့CV ဖောင်က အချက်တွေတိုက်ကြည့်
လိုက်တော့ အကုန်လွဲတော့တာပါပဲ…ကျုပ်ရေးခိုင်းလိုက်တဲ့ ၀န်ထမ်းကလေးမရဲ့ အဖအမည် အမိအမည် မတူဘူး နေရပ်
လိပ်စာလဲ လွဲနေတယ် ရပ်ကွက်နဲ့ လမ်းတော့တူတယ် အိမ်နံပါတ်ကမှားနေတယ် ဒါဆိုကျုပ်အထင်မှန်ပြီ လေ ၀န်ထမ်း
ကောင်မလေးရဲ ရည်စားပဲ ဖြစ်ရမယ် စက်ရုံကိုညာတာပါတေးနဲ့ လာခေါ်တာ ရည်စားဖြစ်တာလဲ သိပ်ကြာသေးဟန်မရှိဘူး
“ကဲညီလေ မင်လာခေါ်တဲ့ကလေးမက နာမည်တော့တူတယ် ဒါပေမယ့်သူမဖြစ်နိုင်ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘအမည်တွေနဲ့
နေရပ်လိပ်စာမတူလို့ပဲ တစ်ခြားစက်ရုံသွားရှာကြည်ပါအုံး စက်ရုံမှာလာပြီထင်တယ်””
အလိမ္မာနည်းနဲ့ပထုတ်လိုက်ရတယ်လေ သူတို့ထွက်သွားမှ လုံခြုံရေး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို နောက်ယောင်ခံလိုက်ပြီး
ရုံးပေါ်ပြန်လာပြီး ၀န်ထမ်းကလေးမခေါ်စမ်း ဆိုပြီးစစ်ရတော့တာပေါ့
“ သမီးရဲ မွေးချင်းမောင်နှမ နာမည်တွေပြောစမ်း”
၀န်ထမ်းကလေးမပြောသမျှနာမည်ထဲမှာ စောစောက ကောင်လေးနာမည်မပါ..။။
“ရပြီသမီး အလုပ်ပြန်ဆင်းလုပ် တော့”
ကလေးမကတော့ သူကိုလာခေါ်တယ်ဆိုတာမသိရှာလို့ သူအလုပ်သူသွားလုပ်နေတော့တာပါပဲ
လုံခြုံရေးအမျိုးသမီးပြန်လာမှ အကြောင်းစုံ သိရတော့တာကိုဗျ…….
““ကွမ်ယာဆိုင်မှာကောင်လေးတစ်ယောက်က စောင့်နေတာ ဆရာ အဲဒီကောင်လေးကို သူတို့အချင်းပြောနေတာက
မင်းစော် လေးငါတို့ခေါ်ပေးတာပဲ ဒါပေမယ် မရှိဘူးပြောတယ်ကွ မင်းကသူအဖေအမေ နာမည်မှ မပြောလိုက်တာ
တို့ကမသိပဲရမ်းရေးတာပေါ့ တဲ့ ဆရာ””
ကဲဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ၀ါးနုက ၀ါးရင့်ပါတ်ချင်လို့ရမလား….ဒီလိုပဲလေ ဒီခေတ်ကလေးတွေ ဘာမသိညာမသိ မဖြစ်သင့်
တာမဖြစ်ရအောင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလဲ အုပ်ချုပ်သူက မိဘ လို စောက်ရှောက်နိုင်ကာမှတန်ကာကျတာ လာခေါ်တိုင်းသာ
ထည့်ပေးနေရရင် မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်လာနိုင်သလို ၀န်ထမ်းမိဘတွေအနေနဲ့ လည်း စက်ရုံအုပ်ချုပ်သူတွေကို
ဒီတစ်နေ့တော့ ..ဒီ အဖြစ်လေးတစ်ခုနဲ့ တင် ကိုယ်ဖြေရှင်းကိုင်တွယ်လိုက်နိုင်လိုက်တဲ့ အတွက် တစ်မြုံမြုံ ပြန်တွေးရင်
ပီတိပွားကာ နံနက်က ပြဿနာများတောင်မေ့ထားလိုက်မိပါကြောင်း……………..။။။။။။။
ကိုဘီလူးကြီးရေ. ဟူးတနေ့ တာအလွဲများလို့ ပြောမလား၊တနေ့ တာမွန်းကြပ်မှုလို့ များပြောရပေါ့မလား။ဒီလိုပါဘဲနေ့ စဉ်ရက်ဆက် ကြုံရဖြတ်ကျော်ရဦးမပေါ့နော့။
ဒီလိုပါပဲဗျာ..။ မောတော့မောတာပေါ့ ၊ သို့ပေမဲ့လဲ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ ရုံးအဆင်းလေး
တွေမှာ တက်သုတ်နှင်ပီး ပြေးရတယ်လေ။ ချစ်စခင်စကြင်နာစ အိမ်သူသက်ထားက အိမ်ကစောင့်နေမှာမို့ ။
တစ်နေ့ဓူဝ ဝမ်းရေး အတွက် တစ်ကုပ်ကုပ် လုပ်၊ ပီးရင် အိမ်ပြန် PC လေးလှန် ၊ စိတ်၏ဖြေရာ online မှာ၊
အမောလဲပြေ ပ ဘီလူးကြီးရ….။
တစ်နေ့ထဲ မောရမှာမဟုတ် နေ့စဉ်ကြုံနေရမှာပဲ…။ ဖတ်ရင်နဲ့ ကျွန်တော်ပါရောပြီး မောသွားတယ်………
မောတယ်… နေ့တိုင်းလိုလို မောနေရတာ….
ရေလုပ်သားနွယ်ဘွား တွေမို့ ပင်လယ်ထဲသွားတဲ့အခါသွား… သူများတွေသွားရင်လဲ စောင့်နေရတော့
ထွက်သွားတဲ့သူတွေ ပြန်ရောက်တော့မှ ပဲ စိတ်မောလူမောနေတာတွေ ပြေပျောက်ခဲ့ရပြန်တော့တာ။
အဲဒီ အမောပြေရတာလဲ တစ်ညတာလေးပါပဲ ၊ နောက်နေ့ တွေ ထပ်ထပ်မောရပြန်ရော…။
ပို့လိုက်ဒဲ့ပစ္စည်းမှားသွားတာက ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲ ဘယ်လိုမှားတာလဲ ဆိုတာလုပ်ပါဦး
ဒါကတော့ ရွာထည်းက ပညာရှင်တွေ ဗဟုသုတရစေခြင်လို့ပါ
ရှစ်ပင်းက ရေကြောင်းဖြစ်နေတာဘဲနော အချိန်ရတာပေါ့
တစ်ကယ်လို့ အဲယားဝေးတွေဆို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲ
သိခြင်သား ( သဂျီးလေသံဖြင့် )
အလုပ်ခွင်ထည်းက အလုပ်သမားတွေကို ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားသလဗျ
အလုပ်သမ အမျိုးသမီးငယ်လေးက အလုပ်ခွင်ထည်းကနေ ထွက်ခွင့် ဝင်ခွင့် ဒီသဘောတွေက
အသိခြင်သား ( သဂျီးလေသံဖြင့် )
အပ်ဆူးတာကို တာဝန်ယူပေးတဲသဘောလေးကို တွေ့လိုက်လို့ပါ
ကျုပ်ကတော့ ဘုမသိ ဘမသိ လိုက်ကောနေတဲ့သူတွေဟာ
တစ်ကယ့် စူပါဗိုက်ဆာ :D တွေဘာလားဆိုတာသိလာရတဲ့အခါ
ဆရာကြီးတွေကို မတန်ရာဝေဖန်မိသူအဖြစ်လည်း သိလာရပါတယ်ဗျာ
ဘလူးဆိုတာ စူပါဗိုက်ဆာ ဗျ စူပါဗိုက်ဆာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမေရိကန်မှာနေတယ်ဆိုပြီး ပြောခြင်တာ လိုက်မပြောနေနဲ့ ကြားလား :D :D :D
အံမာ ငါ့ကိုဒီလို လုပ်လို့ရမလား။ ဒင်းက ဆူပါဆို ကျုပ်က မန်ဂျာ၊ သူက မန်ဂျာဆို ကျုပ်က စီအီးအို၊ ဘီလူးက စီအီးအိုဆို ကျုပ်က ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဌနဲ့ ပိုင်ရှင်သူဌေး…။ မကျေနပ်လို့ သူကပိုင်ရှင်သူဌေးဖြစ်ချင်ရင် ကျုပ်က အာဏာရှင်အစိုးရသမတကြီး၊ ဘာမှတ်တုန်း ဒင်းပိုင်ဆိုင်သမျှကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းပစ်မယ်။ အာဏာရှင်သမတ လုပ်ချင်သေးလာ ရတယ်၊ ငါက အမေရိကန်သမတလုပ်ပြီး ပရီဒေတာမောင်းသူမဲ့ လေယဉ်ပျံကနေ လေဆာပဲ့ထိန်းဒုံးပျံနဲ့ ပစ်ထည့်လိုက်မယ်။
လောကဓံဆိုတာ ဒါပဲလေ။ လူကို ရင့်ကျက်အောင် နူးနပ်သွားအောင် ချက်ပြုတ်ပေးနေတာ။ ပညာတွေလည်း တော်တော်ရသွားပါပေရဲ့။
ပစ္စည်း ၈၀၀၀ ပြင်ဘို့ လူဘယ်နှစ်ယောက် ဂျပန်လိုက်ရလဲ၊Label ပြင်ဘို့ စက်ကိရိယာ မလိုဘူးလား၊warehouse မှာ လိုအပ်တဲ့ စက်တွေရှိလား၊
(Buyer အတည်ပြု တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ Label တွေက သင်္ဘော ထွက်ပြီးကာမှ အကြောင်းကြားလာတယ်လေ)
ဒီလိုဆိုတော့ Buyer confirm မလုပ်သေးတဲ့ label တွေတပ်မိတာပေါ့နော်၊
ဘယ်နေ့ loading လုပ်မယ်ဆိုတာ Buyer နဲ့ delivery date မပြောထားဘူးလား၊
Label ပြောင်းမယ့် အကြောင်း အချိန်မီ အကြောင်းမကြားရင် Buyer fault ပေါ့၊ကိုယ်က လျော်စရာမလိုဘူးပေါ့၊
အဲဒီအတွေ့အကြုံလေး ဆက်ရေးပေးပါအုံး၊Orgre ရဲ့ problem solving ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
လက်နဲ့ပြင်ရမှာပါ စက်မလိုပါ padonmar တို့ အကျီင်္ဝယ်ရင်တံဆိပ်တွေပါပါတယ်
အထည်ရဲ့ main label မှာ ချုပ်ထားသောအထည်တစ်ခုလုံးရဲ့ ပိတ်သားအမျိုးအစား
ရေးသားထားပါတယ် ဥပမာ၊။ 65%cotton 35%polyester ဆိုပါဆို့..အဲဒါက်ိုပြင်မယ်ဆိုရင်
သူကဖျက်လို့မရပါဘူး သူအပေါ်ကနေ ပြင်ချင်တဲ့စာတမ်းပါတဲ့ ကပ်ခွာလေးတွေရှိပါတယ်
အဲဒီကပ်ခွာလေးတွေမှာ ကိုယ်ပြေ့ာင်းလဲခြင်တဲ့ ဥပမာ။100% polyester ဖြစ်ခြင်ဖြစ်နေပါမယ်
အဲဒါလေးကို label ပေါ်ကစာတမ်းပေါ်မှာ လက်ဝင်လှစွာ သေသေချာချောပြာင်းကပ်ရမှာပါ
အချိန်ကြာမှ တစ်ဖြည်းဖြည်းကျွမ်းကျင်လာပြီးမြန်လာတတ်တာပါ..buyer ကိစ္စကတော့ ပြောရရင်
အဲ့ဒီလို မှားတာ … handle လုပ်တဲ့လူ marchandiser ညံ့လို့ပဲလို့ … ထောက်ပြပါရစေ … ။
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ … အဓိက ထားပြီး သေချာ မကြည့်တဲ့ care label နဲ့ fabric composition က သူများနိုင်ငံမှာ သေချာ အဓိကထားတဲ့ အရာတွေ ထဲက တစ်ခုဖြစ်နေလေရဲ့ … ။
အော်ဒါစရကတည်းက care label မမှာခင် ကြိုတင် symbol & composition တွေကို buyer နဲ့ ကွန်ဖမ်းယူထားရတယ် … အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လျှင် … မှားနိုင်တာပဲ … ။
တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်မတို့ တာဝန်ယူထားရတဲ့ ဘိုင်ယာလည်း ဆယ့်နှမျိုးဟင်းချိုလုပ်တယ် … ခုတမျိုးတော်ကြာတမျိုးနဲ့ …. ဒီတော့ စာတွေရေးပြီး အဲဗီးဒန့် ယူထားရတယ် … ပြီးမှ ကွန်တင်နာ လွှတ်ပေးလိုက်တယ် …. အဲ့ဒီအချိန် ကျမှ …ဒီလို label composition မဟုတ်ဘူး ဟိုလို ဆိုလည်း လာလုပ်လို့ မရတော့ဘူးလေ …. သူ ကွန်ဖမ်းပေးထားတဲ့ စာကို ထောက်ပြလိုက်ပြီး ပြသနာကို ရှောင်လို့ရတယ် … ။ ဒီနိုင်ငံမှာ လုပ်နေတဲ့ အထည်ချုပ် အတော်များများက FOB တွေများတယ် … သဘောင်္ပေါ်တင်ပေးတဲ့ အထိပဲ တာဝန်ရှိတယ် … ။ သဘောင်္ပေါ်မရောက်မချင်း ကိုယ်က ချည်ထား တုပ်ထားပြီး ထောက်ထား အပြည့်စုံနဲ့ လုပ်ကြည့် … ဘာ ပြသနာမှ မဖြစ်ဘူး … သို့သော်လည်း … order တစ်ခုလုံးကို handle လုပ်ရတဲ့ … marchandiser ကတော့ .. ကြိုတွေးပြီး ခေါင်းကောင်းတဲ့ လူမှ ဖြစ်မှာပါ … ။ အထည်ချုပ်လောကက စိတ်ဖိစီးမှူများ ၊ တာဝန်ယူမှူ ကြီးသလို .. ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ် … ပေါ့တီးပေါ့ပျက် နေတတ်တဲ့ ကျွန်မကိုတောင် …. စေ့စပ်သေချာတဲ့လူအဖြစ်ပြောင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ် … ။
ရှစ်ပင်းလိုင်းက ဟာတွေကလည်း … မျက်နှာလို မျက်နှာရလေ .. လက်ဆောင်လေးဝယ်လာပြီး သူတို့ လိုင်းသုံးအောင် လာဆွယ်တာ … ။ တကယ်တမ်း ဘိုင်ယာဘက်က instruction ပေးတာမို့လို့ … ဘိုင်ယာက ပြောတဲ့ နော်မနိတ် ရှစ်ပင်းလိုင်းကိုပဲ သုံးပေးရတာ .. ။ တကယ်သာ သူတို့ အကွက်မြင်လျှင် ဘိုင်ယာကို လိုင်းလိုက်ပူးရမှာ .. ဟဟ
တချို့ ဘိုင်ယာနဲ့ နည်းနည်း ပိုင်လျှင်တော့ … ဒီလိုင်းလေး သုံးပေးပါလား .. အကြံပေးလို့ရတယ်… ။
တစ်ကယ့် ဆယ်နှစ်မျိုး ချင်းသုတ်တွေပါပဲ
ကုန်သွယ်မှုကသာ ပေါ်လစီအရ FOB ပေမယ့်
တစ်ကယ်လုပ်နေရတာက ကွန်တိမ်နာ ဟိုဘက်မြေပေါ်ရောက်ရုံတင်မက
ဆိုင်မှာတင်ဖြန့်ပြီးအဆင်ပြေတဲ ထိ လိုက်လုပ်ပေးနေရတာပါ
အဲလိုမှမဟုတ်ရင် Order ရဘို့ မလွယ်ဘူးလေ…။။။။။
အလုပ်များမအားလပ်သည့်ကြားမှ စာရေးသားခြင်း အလုပ်အား
အလွန်တစ်ရာ သဘောတွေ့ မနောခွေ့ လှပါသဖြင့် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်
ကျွန်တော်မှ Garment သဘောတရားများအား သတ်သတ် ရေးသားတင်သွားပေး
ရေးသာရေး .. ဘီလူကြီး .. ဒါမှ အလုပ်ရှင်တွေ ဖတ်မိပြီး …. ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက် အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာ နားလည်သွားမှာ … ဟွန်း မဟုတ်လျှင် … အလကားနေရင်း စိတ်တိုနေတာကိုပဲ အပြစ်မြင်နေတယ် … ဒါတွေကြောင့် ဒီလိုတိုရတယ်ဆိုတာ သိမှကို ဖြစ်မှာ … ဟဲဟဲ ဘီလူးကြီးရေးသမျှ ကျွန်မလည်း အလျင်းသင့်သလို ၀င်ဖြည့်စွက်ပါဦးမယ် .. ။
ကိုဘီလူးရေ ဒါတစ်နေ့တာ အမောတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး
နေ့စဉ်ရက်ဆက် အမောပဲ ဖြစ်ဖို့များတယ်
စာဖတ်ရင်းမောလာလို့ ရေတစ်ခွက်တောင် ပြေးသောက်လိုက်ရသေးတယ်
နောက်နေ့တွေ ဆက်လက်မောဖို့ရှိသေးတယ်ထင်တယ် အားမွေးထားပါဦးနော် …………
အင်းဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ ကိုယ်ပဲ ဖိအားများလှပြီထင်နေတာ အခုတော. ကိုယ်တွေက ပါမွှားလေးပါလား
ကိုဘီလူးကြီး နောက်ဆုံး ၀န်ထမ်းကောင်မလေး ကိစ္စ ဖြေရှင်း ပုံတော. မိုက်တယ်
ပညာယူရမှာဗျ ကိုယ်တွေလည်း အဲလိုတွေစစ်ခံရမှ အရှက်ကွဲမှာစိုးလို.
ကို ogre ရေ..အဲလိုမောတာ ကိုယ်တယောက်တည်း မထင်နဲ့…ကျွန်တော်လည်း နေ့တိုင်းမောရတယ်…
တခါတလေ ထွက်ပြေးချင်တဲ့စိတ်ပေါက်တယ်…ပြီးခဲ့တဲ့လက ဘောစိကိုတောင် ပြောလိုက်တယ်…အလုပ်လုပ်ရတာစိတ်ကုန်နေပြီလို့…ဘောစိကတော့ချော့မော့ပြီး ပြန်လုပ်ခိုင်းတာပေါ့….ကျွန်တော်တို့ Import မှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ…shipment လုပ်ပြီဆိုရင် ရင်တမမနဲ့…B/L မှာ နဲနဲလေးလွဲတာနဲ့ တိုင်ပတ်ပြီ…သေသေချာချာ မှာထားတာတောင် တခါတလေ shipper က အလွဲလုပ်တတ်တယ်…တခါ Aussie ကနေ import လုပ်တာ တိုက်ရိုက်သွင်းလို့မရတော့ စလုံး ကတဆင့်ခံသွင်းရတယ်…အဲဒီတော့ စလုံးကို L/C ဖွင့်ရတာပေါ့…အဲဒီမှာ တိုင်ပတ်တာဘဲ…aussie ကနေ original B/L ကို စလုံး ပို့ လိုက်တာ စလုံး မရောက်ဘဲ ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး…aussie ကရောင်းတဲ့သူက ပိုက်ဆံအရင်ယူထားပြီးသားဆိုတော့ ကိုယ်ပြောသလိုမလုပ်ဘဲ သူမှန်တယ်ထင်ရာလျှောက်လုပ်လိုက်တာ….ဒီမှာ cargo ထုတ်ဖို့အတွက် တော်တော်လုပ်ယူလိုက်ရတယ်..
ပြီးတော့ company ကလည်းသေးတော့ လုပ်ရတဲ့အလုပ်က အတည်တကျ မရှိဘူး…ဘောစိမရှိရင် ဘောစိနေရာ ကိုယ်စားဝင်လုပ်ရသလို…တခါတလေ ဒရိုင်ဘာ မရှိရင် (တခြား ကားမောင်းတတ်တဲ့ ၀န်ထမ်းလည်း မရှိရင်) ဒရိုင်ဘာလည်း ၀င်လုပ်ရတယ်…. တခါတလေ စဉ်းစားမိတယ် ငါတခြားနေရာကို အလုပ်ပြောင်းလျှောက်ရင် ဘာ post နဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးလည်းမေးရင် ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲလို့…..
ပြောရရင်တော့ အများကြီးဘဲ…ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ဘဲ အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ internet မှာ fb ကြည့်တယ်…news တွေဖတ်တယ်…MG က စာတွေဖတ်တယ်…game ဆော့တယ်..ဒီနည်းနဲ့ဘဲ stress တွေကို ဖြေဖြောက်ရတယ်… လောကကြီးကတော့ဒီလိုပါဘဲ…အသက်တရာ မနေရပေမဲ့ အမှုပေါင်း 100 GB စာလောက် ကြုံရတတ်တယ်….
ဟုတ်သားပဲ… ဒီလိုလမ်းကြောင်းက ၀ါရင့်ဦးဘီလူးကြီး လမ်းစဉ်တွေကိုများလာပြီး သုံးနေတော့ မသိပဲနေမလားနော့…..
အမလေး လေ့ လေး………….
သူတို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖျားနာကိုက်ခဲ၊ ထိခိုက်ရှနာဖြစ်ရင် ကိုယ်ဘာသာ လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးယူသုံး
ကိုယ်သုံးတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာ စာအုပ်မှာ စာရင်းအတိုင်းဖြည့်လိုက်ရင် ပြီးနေတာပဲ
မန်နေဂျာက အဲဒီကိစ္စထိလိုက်လုပ်နေရ သေပြီပေ့ါ
ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးယူသောက်၊ ပလာစတာကပ်
ပြီးရင် ကိုယ်ဘာသာ ကိုယ့်နာမည်၊ ကိုယ်ဝန်ထမ်းနံပါတ်ရေးပြီး ကိုယ်ယူတဲ့စာရင်း ကိုယ်ဘာသာဖြည့်လိုက်တာပဲ
ကိုယ်ယူသုံးတာကိုယ်ဘာသာဖြည့် လက်ကျန်ရေးပေးဖို့က ကိုယ့်တာဝန်
မန်နေဂျာလည်း ဒီပေါက်စနကိစ္စ ခေါင်းထဲထည့်မနေရတော့ဘူး
ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေတော့ ကိုဘီလူးက ဂျာကြီးဆိုတော့ သူများထက် ပင်ပန်းခံရတော့မှာပေ့ါလေ
အလုပ်လည်းလုပ်ရ လူလည်းထိန်းရနဲ့ (ကလေးထိန်းရတာထက်ခက်တယ်)
ကြာရင် ကိုဘီလူးဆံပင်ဖြူရုံမက ဆံပင်တောင်ကျန်တော့မှာမဟုတ်ဘူး
ခေါင်းပူပြီး ကျွတ်မှာ….ကျွတ်မှာ….။ :D